Topnepalnews.com | नेपालमा किन हुँदैन उच्चस्तरीय भ्रमण ?
Posted on: August 05, 2016 | views: 522
काठमाडौं,साउन २१ । नेपाल–बेलायत सम्बन्धको दुई सय वर्ष पूरा भएको छ। रुस र जापानसँग नेपालको सम्बन्ध स्थापित भएको ६० वर्ष पुग्दै छ। तर, यी मुलुकबाट नेपालमा र नेपालबाट ती देशमा अहिलेसम्म उच्चस्तरीय भ्रमण सकेको छैन। सरकारले तीनवटै मुलुकका सरकारप्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखलाई भ्रमणका लागि ‘स्ट्यान्डिङ’ निमन्त्रणा पठाइसकेको छ, तर उनीहरू आउने अझै यकिन छैन। नेपालमा लामो समयदेखि अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन।
चर्चामा चीन र भारतको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण
नेपाल–बेलायत २०० वर्ष
डेढ दशकदेखि बेलायतका राष्ट्रप्रमुख आएका छैनन्
आउलान् त जापानी उच्चअधिकारी?
नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको आउँदो सेप्टेम्बर १ मा ६० वर्ष पुग्दै छ। तर, यसबीचमा दुवैतिर भ्रमणहरू सकेको छैन। सरकारले जापानी प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेको छ, तर उताबाट उच्चस्तरीय भ्रमण टुंगो छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।